Amathuluzi amahlanu aphakamisa kuwo wonke ama-Blogger okuqala
Ngakho uqale ibhulogi yakho. Siyakuhalalisela! Mhlawumbe ufuna ukuhlala nayo,noma mhlawumbe ufuna nje ukwabelana ngemibono kusuka eholidini yakho yakamuva nabangani futhiumndeni. Noma ngabe yikuphi, kunezindlela eziningi ongenza ibhulogi yakho ibonakale isabekayo futhi ibuchwepheshe.U-Julia Vashneva, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, uncoma amathuluziokubalulekile kunoma ngubani ofuna ukuvula ibhulogi.
1. Umshumayeli we-proofreader
Ukuphawula kuhle, kodwa akusiyo njalo kulungile - evod battery with protank 3. Kuye nge-platform yakho yokubhuloga(I-Blogger, i-Wordpress, njll), ungase ungabi nhlobo umsebenzi wokupela. Futhi ngishouma ucabanga ukuthi ukubhala kwakho kanye negrama kuhambisana nezwe elifundisiwe, abafundi bazoqaphela konke okungaphelele. Kulokhu, ngincoma i-Grammarly. Grammarlyi-plugin yamahhala, eyenzelwe ukubhala okuwusizo. Ihlola ngokuzenzakalelayo konkekokubhala kwakho kokubili amaphutha avamile futhi athuthukile bese unikeza iziphakamiso zendlela yokuzilungisa.
2. Isichazamazwi sesithombe
Kufanele ube nomthombo lapho ungathola khona izithombe ezibukeka kahle mahhala. Siphilaemphakathini obukwayo, nalapho abantu befunda ku-Intanethi, balindele ukubona imibala kanyeihluzo..Uma uya ezintweni zokuqala ozithola ku-Google, uzothatha ingoziukulayisha ngokungekho emthethweni. Izindaba ezinhle ukuthi kukhona amasayithi aphuma lapho angakwaziUsizo! I-Morgue File ne-Wikimedia Commons yizindawo ezimbili ongayilandaizithombe zezithombe mahhala ngaphandle kwemvume ephephile yesithombe sezithombe.
3. Ikhalenda noma uMhleli
Abantu bathanda amabhulogi avuselelwe njalo. Izibuyekezo ezivamile zisho okukhulu nakakhuluukufundela okuzinikele, okusho ukukhangisa nokuphumelela kwebhulogi yakho. Iningiochwepheshe batusa ukuvuselela ibhulogi yakho okungenani kathathu noma kane ngesonto - kodwauma ungahle uhlele okuthunyelwe kwakho kusengaphambili, uzophelelwa yimibono! AbanyeAma-blogger akhetha amakhalenda wendabuko-ne-iphepha kanti amanye enza kahleamaspredishithi kukhompyutha. Noma iyiphi indlela, qiniseka ukuthi ungakwazi ukukhipha konkeukubhala kwakho kwamasonto ambalwa alandelayo ukuze ungaqhubeki okuqukethwe!
4. Umcwaningi wegama elingukhiye
Amagama angukhiye, i-SEO, namathegi angazwakala njenge-mumbo-jumbo kuma-blogger amasha, kodwaUkuzifunda kungabamba ibhulogi yakho phezulu kwemiphumela yokusesha injini.Umqondo oyinhloko ngemuva kwe-SEO (search engine optimization) ukukhetha ukuthi yikuphiamagama abantu azosesha uma befuna ibhulogi yakho. Ngokwesibonelo,lesi sihloko singaba namagama angukhiye afana nokuthi "ukubhuloga," "ukuhlelwa kwebhulogi", njll.Kungumqondo omuhle ukuba la magama aphindaphindiwe ezihlokweni zakho ukuze useshoizinjini zingabathola kalula. Ngenkathi amapulatifomu amaningi ebhulogi afaka izindlelafaka amagama akho angukhiye, amathuluzi afana ne-Google Keyword Planner angabonisa ukuthi bangakiabantu bafuna amagama akho angukhiye nsuku zonke, ukuze uthole okuthandwa kakhulu.
Nalawo ohlangothini lobuchwepheshe bezinto, amathuluzi wokuhlaziya afana ne-Google Analytics azokutshelawena bangaki abantu abavakashele ibhulogi yakho namhlanje, noma ngesonto eledlule, noma ngabe yini. Futhiikhombisa indlela abafundi abathola ngayo isayithi lakho nokuthi yimiphi imigomo yokusesha ethandwa kakhulu, wenaUngakwazi futhi ukufunda ukuthi yiziphi izikhala ezitholwa kakhulu. Ngesikhathi ama-analytics ekhonaKuhle kakhulu kumapulatifomu okubhuloza namuhla, qiniseka ukuthi uyaqonda yonke imisebenziyale thuluzi ukuze ukwazi ukulandelela ukufunda kwakho futhi ufunde ukuthi yini eyenza ibhulogi yakho ivele.
ukubhuloza kungaba yinto yakho yokuzilibazisa enkulu nokusebenza okuzuzisa, kodwa ukuqhuba ibhulogi,Ngempela, kudinga imizamo eminingi. Kusukela kokuhlangenwe nakho Semalt , amathuluzi alungilekuzokunciphisa isikhathi sakho sokufunda nesiphambeko ukuze ube lula ukuhamba ngqo.